Indlu entle esandula ukwakhiwa kwaye inendlu entle enezinto oziphetheyo. Indlu izolile kakhulu, kufutshane nedolophu (imizuzu engama-20 uhamba okanye i-5 mins drive) inomnyango wabucala. Inekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, indawo yokuhlamba impahla, iTV ehlakaniphile eneNetflix kunye nempompo yobushushu yokufudumala ebusika kunye ne-air conditioning ehlotyeni.
Ukukhwela inkampu kunye ne-cinema kaRuby / ibha isekupheleni kwendlela ukuba uyathanda ukuphuma uye kusela, i-snack / isidlo esincinci okanye imuvi.
ICardonna kunye neTC ski fields are 25 mins drive away .. Yiza uzonwabele!
Indlu enkulu ye-35 sqm enegumbi lokulala elahlukileyo. Zonke izixhobo ezibandakanya ikhitshi eligcweleyo, umatshini wokuhlamba, impompo yobushushu kunye nefenitshala entle. Indawo yokuhlala ngaphandle kwendlu kwaye ube neglasi yewayini yangokuhlwa!
4.99 ·Izimvo eziyi-73
Indawo ezolileyo, amakhaya amakhulu anosapho. I-cinema ye-Ruby kunye ne-Base Camp Ukunyuka ekupheleni kwendlela (i-2 mins ihamba). I-cinema kaRuby nayo inebhari encinci apho unokufumana i-snacks / izidlo ezincinci kunye neziselo.